Balihoo: Qalabaynta Suuqgeynta Maxalliga ah | Martech Zone
Balihoo: Qalabaynta Suuqgeynta Maxalliga ah
Jimco, Juun 29, 2012 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Maanta waan haysanay Shane Vaughan ka baxa raadiyaha oo ka hadlaya otomaatiga suuqgeynta maxalliga ah. Shane waa CMO ee Balihoo, shirkad bixisa adeegyo otomaatiga suuqgeynta maxalliga ah. Balihoo waa madal otomaatig suuq geyn u adeegta shirkadaha shirkadaha leh baahiyaha suuqgeynta heer maxalli ah, sida xayeysiisyada, qeybinta tafaariiqda, ama shirkadaha adeegga maxalliga ah. Tusaalayaashu waa sida 1800Doctors.com, Geico, Furaash la magacaabo wax yar.
Dhageyso Wareysiga aan la yeelanay Shane Vaughan
Balihoo waa adeeg bixiyaha koowaad ee tikniyoolajiyadda is-gaarsiinta Suuq-geynta Maxalliga ah iyo adeegyada loogu talagalay noocyada qaran ee leh baahiyaha suuqgeynta maxalliga ah. Balihoo waxay awood u siineysaa suuqgeynta heerka ganacsiga heer maxalli ah waxayna siineysaa sumadaha qaranka muuqaal buuxa dhammaan howlaha suuq-geynta maxalliga ah iyo natiijooyinka.
Shane Vaughan oo ku saabsan Suuqgeynta Maxalliga ah:
Balihoo wuxuu sharxayaa baahiyaha iyo faa'iidooyinka otomaatiga suuqgeynta maxalliga ah:
Gaadho rajo ku dhow barta iibsiga - Dabeecadda iibsashada macaamiisha ayaa is beddeshay. Shabakadda maxalliga ah ayaa si isdaba joog ah loo adeegsadaa noocyo badan oo warbaahineed ayaa lagu daraa habka go'aan qaadashada caadiga ah. Otomaatiga maxalliga ah wuxuu awood u siinayaa sumadaha qaranka inay ilaaliyaan xakamaynta muddada dheer ee habka isgaarsiinta iyo iibinta.
In la tirtiro ku tiirsanaanta la-hawlgalayaasha maxalliga ah iyo la-hawlgalayaasha - Qaado khibraddaada suuqgeynta ee heer qaran isla markaana soo dejiso. Ku gaadho suuqyo badan oo maxalli ah adoo ku dadaalaya sidii aad u fulin lahayd hal olole oo aad u fahamto suuqyada maxalliga ah adoo maraya Analytics si aad u wanaajin karto soo celinta ololaha qaran maalgashiga.
Hesho waqtiga ku habboon, natiijooyinka isku-darka ah ee dadaallada suuq-geynta maxalliga ah - Adeegso deegaanka Analytics si loo ogaado isbeddellada ka jira suuqa isla markaana loo hagaajiyo dadaallada ololaha qaran.
Raadinta iyo bulshada ayaa wada suuqgeynta maxalliga ah si weyn kumana filna in astaamahan waaweyn ay lahaadaan joogitaan qaran. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay raadinayaan gobol ahaan iyagoo adeegsanaya baaritaanno juquraafi ahaan la beegsaday. Xitaa iyada oo aan la helin shuruudaha juqraafi, makiinadaha raadinta waxay adeegsadaan bartilmaameed juqraafiyeed iyada oo ku saleysan meesha isticmaalaha… ama ay saameyn ku yeelatay shabakadda bulshada ee isticmaalaha. Si kale haddii loo dhigo, dabeecado badan oo raadinta ah ayaa lagu bartilmaameedsanayaa macnaha juqraafi mana la iska indho tiri karo.
Balihoo waxay bixisaa caawimaad degel degmo, suuq geyn la shaqeysa, suuq geyn iskaashi iyo xayeysiin, iyo dhisme xayeysiis oo ku jira hal xirmo oo bixiya ganacsiga yar yar ee maxalliga ah si ay awood ugu yeeshaan inay si fudud ugu maareeyaan kharashkooda suuq geynta iyo inay fahmaan halka ay ku laabaneyso maalgashiga.
Tags: Balihoosuuq geynta maxalliga ahotomaatiga suuq geynta deegaankaraadinta maxalliga ahmarketingshane vaughan
Douglas Karr Friday, June 29, 2012 Thursday, June 18, 2015
Formstack: Vault Aqoonsiga Macaamiisha Hay'addaada
Muxuu Midabku Ka Yidhaahdaa Sumaddaada